Nke a bụ ihe mere:
M gbagwojuru anya ihe site na ịgafe blọọgụ ya na ihe nkesa ọzọ, n'amaghị na enwere nsogbu DNS. Nke a na-agbakwunye ọkwa ọzọ nke mgbagwoju anya. Okwuntughe na WordPress (na ọtụtụ ngwa nchekwa data ndị ọzọ) bụ ihe ezoro ezo nke ihe nkesa na ha nọ. Ọ bụrụ n ’ibugharị saịtị ahụ gaa na ihe nkesa ọzọ, ị nwere ike iwepu ikike i nwere iji kọwaa paswọọdụ ahụ. Obi dị m ụtọ, WordPress (ihe ọzọ dị ukwuu) nwere usoro mgbake paswọọdụ ebe ị nwere ike ịtọgharịa paswọọdụ gị site na njikọ dị na email.
Tupu nke a emee, ekwesịrị m ịsị na m na ụlọ ọrụ nnabata web mara mma na-eme nkwado ndabere zuru ezu. Enwebeghị m nsogbu na ha enweghị ike idozi site na nkwado ndabere. Anụla m nrọ ọjọọ site na ndị ọzọ na blọọgụ ha na saịtị ha. Enweghị m ike iche n’echiche ihe ịgabiga ebe ahụ. (Denye aha na ndepụta RSS m ma ị nwere ike nweta akwụkwọ ego maka afọ efu na ndị ọbịa m).
Nke a mere ka m kwenye na enwere ike ịbanye ebe nrụọrụ ahụ. Ihe nkesa aha ahụ ziri ezi mana peeji nke na-abịa bụ ụfọdụ peeji dị egwu nke dị ka spam. Ejiri m Ndụ nkụnye eji isi mee tinye na Firefox iji hụ na anaghị ebugharị m - mbanye anataghị ikike nke ọtụtụ ndị na-ahụ. Ebugharị saịtị ahụ. Enwere m ike ịme ụfọdụ nchọpụta nsogbu ọzọ; agbanyeghị, esoro m onye ọbịa m banye tiketi nkwado ka ndị ọkachamara ha wee nwee ike ịmalite nyocha.
Enwere m olileanya na mwepụta WordPress n'ọdịnihu na akwụkwọ ndekọ aha 3 ndị a bụ mgbọrọgwụ akwụkwọ ndekọ karịa obere akwụkwọ ndekọ aha. Ọ ga - eme ka nkwalite dịkwuo mfe! N'oge a, onye nnabata m achọtala nsogbu DNS wee gbanwee saịtị ahụ nke ọma. Chei! Ugbu a peeji nke Pat na-abịa abịa na ozi nkwalite WordPress. M pịrị site iji kwalite nchekwa data na ọ na azụ… fọrọ nke nta.
Cheta okwu nzuzo m kwuru maka ya? Ee, Pat enweghị ike ịbanye n'ihi ya. Okwuntughe ya anaghịzịkwa aba uru na nchekwa data nke ọma ka m wee nwee mgbazigharị ọzọ. Agara m banye na nchekwa data wee gbanwee adreesị ozi-e Pat na tebụl onye ọrụ na adreesị email m. Mgbe ahụ, m tinyeziri atụmatụ “Lost my Password” iji zitere onwe m njikọ iji tọgharịa okwuntughe. Mgbe migigharị paswọọdụ, m banyere wee gbanwee adreesị ozi-e Pat.
Ma ugbu a, Pat azụla! Hindsight bụ 20/20… ọ bụrụ na echere m na onye ọbịa m, a gaara edozi okwu ahụ. M gbagwojuru anya okwu a. Agbanyeghị, Pat si ugbu a kwalite ma na-arụ ụdị kacha mma nke ihe niile. Ọ dị m nwute na ọ nọrọ ogologo oge, n'agbanyeghị. Ọ naghị ewe ogologo oge ịlaghachi azụ n'oge ụra, mana ọ bụ nsogbu na-adịghị mma! Ndo, Pat!
Ọ bụrụ nọnyeere gị ezigbo onye ọbịa, dabere na ha ka ị chọpụta ma dozie esemokwu ahụ.